माग कम भएपछि खसीबोकाको मूल्य किलोमै २० रुपैयाँ घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
- च्याङ्ग्राको मूल्य अति महँगो
- कलंकी बजारमा ५० प्रतिशत भारतकै खसीबोका
आश्विन २७, २०७८ राजु चौधरी
काठमाडौँ — खसी बजारमा सर्वसाधारणको चहलपहल कम भएपछि व्यवसायीले खसीबोकाको मूल्य किलोमा २० रुपैयाँ घटाएका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनसँगै भारतबाट समेत पर्याप्त मात्रामा खसीबोका आयात भएपछि चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीले मगलबार किलोमा २० रुपैयाँ घटाएको जनाएको छ ।
‘भारतबाट सोमबार राति ५/७ ट्रक खसीबोका भित्रियो । स्वदेशकै विभिन्न जिल्लाबाट पनि ३/४ गाडी आए, थप आउने क्रम जारी नै छ,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘पर्याप्त उपलब्धतासँगै खसीबोकाको मूल्य २० रुपैयाँ घटेको छ ।’ खसीबोका फूलपातीदेखि नवमीसम्म बिक्री हुने हुँदा व्यवसायीहरूले थप मगाइरहेका छन् । उपत्यका भित्रिने क्रम अझै जारी नै छ । जसले गर्दा मूल्य घटेको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार सोमबारसम्म कलंकी बजारमा स्वदेशी खसीबोका प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । मंगलबार प्रतिकिलो ६ सय ५० रुपैयाँदेखि ६ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । भारतीय खसीबोका प्रतिकिलो ७ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । मंगलबार भने प्रतिकिलो ६ सय ८० रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको जनाएको छ । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे मूल्य अझै घट्छ,’ थापाले भने ।
अहिले बजारमा स्वदेशी ५० र भारतीय ५० प्रतिशत खसीबोका कारोबार भइरहेको छ । ‘भारतीय खसीबोका लखनऊ, मध्यप्रदेश, कलकत्ता, दिल्लीलगायत क्षेत्रबाट आयात भएको छ । स्वदेशी खसीबोकाको हकमा बाँके, बर्दिया, सल्यान, सुर्केत, मन्थली, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाबाट खरिद भएको छ,’ थापाले भने ।
दसैंका लागि खसीबोका मुख्यतः फूलपाती, अष्टमी र नवमीमा बिक्री हुन्छ । गत वर्ष दसैंमा मात्रै ४५ देखि ५० हजार खसीबोका बिक्री भएको थियो । उक्त खसीबोका प्रतिकिलो ६ सय ६० देखि ६ सय ७० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । माग बढ्दै गर्दा किलोको ८ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । अहिले भने दसैंमै मूल्य घटाएका हुन् ।
च्याङ्ग्राको हकमा भने अचाक्ली महँगो भएको छ । चीनबाट च्याङ्ग्रा आयात नहुँदा बिचौलियले मूल्य अति नै बढाएका छन् । व्यवसायीका अनुसार किसान र उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तीन तह पार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मूल्य बढेको हो । चीनबाट आयात नहुँदा एउटै च्याङ्ग्राको मूल्य ३८ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँ परेको संघले जनाएको छ । महँगोकै कारण यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले च्याङ्ग्रा आयात गरेन । खाद्यले दसैंका लागि एक हजार च्याङ्ग्रा आयात गर्ने जनाए पनि खरिद गर्न सकेन ।
सहुलियतका खसी सकिन लागे
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले साढे १९ सय खसीबोका बिक्री गरेको छ । हस्तक्षेप गर्न भन्दै सहुलियतमा बिक्री सुरु गरेको खाद्यले तीन दिनमा १९ सय ४९ खसीबोका बिक्री गरेको हो । ‘यस वर्ष २ हजार खसीबोका खरिद र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । मंगलबार १ बजेसम्म १९ सय ४९ खसीबोका बिक्री भइसकेको छ,’ कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘अब ४० वटा मात्रै बाँकी छन् । मंगलबार बेलुकी नभए बुधबार बिहानसम्म सबै सकिन्छ ।’ खाद्यले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६ सय ४० रुपैयाँ तोकेको छ ।
खाद्यले खसीबोका दाङ, मकवानपुर, हेटौंडाबाट खरिद गरेको जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा २५ किलोदेखि माथिका खसीको मूल्य प्रतिकिलो ५ सय ६५ रुपैयाँ, २० देखि २५ किलोको खसीको मूल्य प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँ र बोका प्रतिकिलो ५ सय ४५ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । खसीबोका खरिद गर्नका लागि जिल्ला प्राथमिक खरिद समिति हुन्छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खाद्य, कृषि विकास र किसानसहित सदस्य रहन्छन् । समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि सोही मूल्यमा सरकारले खरिद गर्छ । उक्त खसीबोकामा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार गत वर्ष २ हजार खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि १५ सय १० वटामात्रै बिक्री भएको थियो । यस वर्ष भने खरिद र बिक्री राम्रो भएको उनले बताइन् । ‘बजार हस्तक्षेप गर्न खोजेका थियौं । लक्ष्य पूरा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लक्ष्यअनुसार खरिद र बिक्री भएको छ । बजारभाउ पनि आकासिएको छैन ।’
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७८ ०६:५५
कस्ता खसीबोका स्वस्थकर ?
विभाग भन्छ– ‘चिकित्सकहरुले स्वस्थ चौपायालाई हरियो र अस्वस्थलाई रातो स्टिकर लगाइदिएका छन् । उपभोक्ताले यही आधारमा रोज्दा हुन्छ ।’
आश्विन २६, २०७८ राजु चौधरी
काठमाडौँ — दसैंलाई लक्षित गर्दै व्यवसायीहरूले विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका उपत्यका भित्र्याउँछन् । अन्य समयको भन्दा धेरै माग हुने भएकाले भारतबाट समेत आयात गर्छन् । ती खसीबोकाहरू कत्तिको स्वस्थकर हुन्छन् त ? जानकारहरूका अनुसार माग पूर्ति गर्नका लागि अस्वस्थ खसीबोका पनि बिक्रीमा राखिएको हुन्छ । ती खसीबोका पहिचान गर्न पशु सेवा विभागले बढी चौपाया बिक्री हुने स्थानमा ४५ जनाभन्दा बढी पशु चिकित्सक खटाएको जनाएको छ ।
‘तीन तहका सरकारको समन्वयमा चौपाया बिक्री हुने उपत्यकाका मुख्य स्थानहरू कलंकी, टुकुचा, सल्लाघारी, चन्नाखेल, बालाजु, बाइसधारालगायत ८ स्थानमा पुश चिकित्सक खटाएका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने, ‘बुधबारसम्म बढी चाप हुन्छ । त्यही भएर सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कलंकी खसी बजारमा मात्रै १० जनाभन्दा बढी चिकित्सकको टोली खटाएका छौं ।’ उनका अनुसार चौपाया खरिद गर्दा स्टिकरको रङ हेरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्छ । स्वस्थ खसीबोकामा हरियो र रोगीको हकमा रातो रङको स्टिकर लगाइएको हुन्छ । ‘अनुगमनमा खटिएका चिकित्सकहरूले स्वस्थ खसीबोका, च्यांग्रा र राँगाको हकमा हरियो र अस्वस्थको हकमा रातो रङको स्टिकर लगाइदिएका छन्,’ उनले भने, ‘सर्वसाधरणले यही आधारमा चौपाया रोज्दा उत्तम हुन्छ ।’
विभागको तथ्यांकअनुसार बाख्रा, पाठा/पाठी, खसीबोकासहित मुलुकभर वार्षिक १ करोड ४० लाखवटा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये खसीबोकाको संख्या मात्रै ५४ लाख हुन्छ । समग्रमा दैनिक १ हजारदेखि १२ सयवटासम्म बिक्री हुन्छ । दसैंमा थप ५०–५५ हजारवटासम्म चाहिन्छ । हाल दाङ, सुर्खेत, सल्यान, सर्लाही, चितवन, धादिङ, काभ्रेलगायत जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरहरूमा खसीबोका भित्रिने गर्छ । चाडबाडमा खसीबोकाको माग अत्यधिक हुँदा माग धान्न व्यवसायीहरूले भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत आयात गर्ने गर्छन् ।
चौपया व्यवसायी संघ कलंकीका अनुसार खसी बजारमा स्वदेशी उत्पादनले ६० प्रतिशत र भारतबाट आयातितले ४० प्रतिशतसम्म माग धान्छ । चाडबाडबाहेकको समयमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ४० प्रतिशत रहन्छ । ‘स्वदेशी उत्पादन अपुग भएपछि आयातमै भर पर्नुपर्छ, चाडबाडका लागि भारतमै निर्भर छौं,’ संघका निर्वतमान अध्यक्ष दीपक थापाले भने । चाडबाडमा धेरै बिक्री हुने भएकाले यही मौकामा अस्वस्थ खसीबोकासमेत आयात भएको पाइएको छ । कतिपय खसीबोका ढुवानी गर्ने क्रममा बिरामी हुने थापाले बताए ।
विभागका सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ हजारवटासम्म खसीबोका भारतबाट आयात भएको छ । आयातितसँगै स्वदेशमै उत्पादन भएका खसीबोका पनि काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा अस्वस्थ हुने अवस्था रहन्छ । अस्वस्थ खसीबोकामा श्वासप्रश्वास बढ्ने, नाक, मुख र आँखाबाट र्‍याल, सिँगान आउने लक्षण देखिन्छ । टाउको आकाशतिर उचालेर फनफनी घुम्ने, कराउने र लड्नेजस्ता लक्षण देखिएका खसीबोका पनि अस्वस्थ हुन् । ‘ती खसीबोकाको हकमा रातो रङ लगाएर आइसोलेसनमा राखिन्छ । केही समय होल्ड गरेर पुनः परीक्षणमा स्वस्थ देखिए मासु प्रयोजनमा पठाइन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष शीतलकाजी श्रेष्ठले पनि पशु चिकित्सकले नहेरेको ठाउँमा खसीबोका किन्दा सर्वसाधरण आफैं सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘झोक्राएको छ–छैन, शरीर तातो छ/छैन पहिचान गर्नुपर्छ । रोगी खसीबोका जिङरिङ्ग परेका हुन्छन् । त्यस प्रकारको छनोट गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गिँजा र खुट्टाको खुरमा घाउ आएको, घाँस नखाने, सुस्त लक्षण देखिने खसीबोका पनि मासुका लागि योग्य हुँदैन ।’
पशु चिकित्सकको टोलीले मुख्य संकलन केन्द्रदेखि सडकमा राखेर बिक्री गर्दासम्म परीक्षण गर्ने विभागले जनाएको छ । यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिक्री गरिरहेको थापाथली गोदाममा पनि निरीक्षण र परीक्षण भइरहेको ढकालले बताए । खाद्य कम्पनीले असोज २३ देखि दसैंलक्षित खसीबोका बिक्री गरिरहेको छ । विभागका अनुसार परीक्षणको क्रममा धेरैजसो खसीबोका स्वस्थ पाइएको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न पशुपन्छी बजारमा गत असोज २१ (घटस्थापना) देखि २५ सम्म २८ हजार ५ सय ९ वटा चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ३ वटा मरेका, २५ वटा बिरामी र ८ वटाको उपचार भइरहेको छ । ‘सबैभन्दा धेरै खसी (२३ हजार ६ सय ६८ वटा) को परीक्षण भएको छ । यसबाहेक बोका १ हजार ९ सय ९६, बाख्रा १ सय ५०, भेडा १ सय ६३, च्यांग्रा २ हजार १ सय ४, राँगा/भैंसी २ सय ६४, बंगुर/सुँगुर ४, कुखुरा ५० र हाँस १ सय १० वटाको परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश चौपाया स्वस्थ पाइएको छ ।’
प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०७:५७
लोमन्थाङको गुफामा लोभलाग्दो ‘गेस्ट हाउस’